Hery Rajaonarimampianina : Kandidà -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Kandidà
18/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Teraka ilay nandrasan’ny besinimaro. Nambaran’ny Filohan’ny Repoblika am-perin’asa, Hery Rajaonarimampianina tamin’ny fomba ôfisialy omaly, tetsy amin’ny Hotel Colbert Antaninarenina, ny firotsahan-kofidiana Filoham-pirenena. Tsy tonga irery nanatanteraka io lanonam-panambarana ôfisialy io ny tenany tamin’izany fa notronin’ny vady aman-janany sy ireo olo-manan-kaja maro ary ireo nasaina.
Ny Filoha Hery Rajaonarimampianina izany no kandida faha-14 nanatitra ny antotan-taratasy firotsahan-kofidiana teny anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC). Omaly ihany, taorian’ny fanambarana ofisialy nataony, dia efa voaatitra teny anivon’ity andrim-panjakana ity ny antotan-taratasy manambara ny firotsahany.
« Toa mitamberina ao an-tsaiko, ao anatin’ny eritreritro sy ao anatin’ny fotoana fohy tahaka ny horonan-tsary izay dimy taona nolalovana izay. Teto amin’ity toerana ity, dimy taona lasa izay, volana aogositra tahaka izao, no nanaovako sy nanombohako ny fanamby amin’izay hitantanako ny firenentsika. Nanombohantsika nanoratra tantara, mbola mitohy ary heverintsika, araka ny fangatahanareo ny mbola hanohizana izany tantara izany », hoy ny fanambarany nanoloana ireo olona marobe.
Maro tsy tambo isaina tokoa ny fanehoan-kevitra tao ho ao amin’ny fangataham-pirotsahan-kofidiana ny Filoha am-perin’asa. Noho ny faharesen-dahatra tamin’ny zava-bitan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina teo amin’ny sehatra maro tao anatin’izay efa-taona mahery izay, betsaka ny fanohanana sy fangatahana ary fitakiana ny mbola hanohizany ny asa fanarenana sy fampandrosoana an’i Madagasikara. Raha tsy hitanisa afa-tsy ny fanomezana hopitaly maro manerana ny Nosy, ny fanamboaran-dalana, ny fanomezana sekoly sy ny fampidirana mpampianatra Fram ho mpiasam-panjakana, ny fanomezana rano fisotro madio sy herinaratra tamina faritra maro, ny fametrahana toho-drano, ny ezaka amin’ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana amin’ireo faritra mena any ambanivohitra sy eto an-drenivohitra, sns.
Izany indrindra no nanosika ny maro amin’ny fangatahana ny firotsahan-kofidian’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina indray ny amin’ny tokony hanohizana ny asa efa natomboka. « Dimy taona aty aoriana isika izao, henoko ny fangatahanareo, ny fampirisihanareo, ny antsonareo, ny fiangavianareo hanohy ny asa efa natomboka… Tsy mora ny sedra niainantsika sy ny lalan-kizorana tao anatin’izay fotoana izay. Mila mahafantatra anefa isika hoe taiza no niaingana raha te handrefy sy hifandrefy eo amin’izay zavatra efa vita”, hoy hatrany izy.
Ny tantara tsy fanadino. Tsy takona afenina fa firenena voasazy i Madagasikara nandritra ny taona maro tamin’ny fitondrana Tetezamita. Ny Filoha Hery Rajaonarimampianina no nanafaka an’i Madagasikara tamin’izany sy namerina indray ny firenena ho eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Noho ny fahatokisan’ireo mpamatsy vola ny Fitondram-panjakana izay notarihiny no nampiverina sy nampiroborobo ny fanampiana sy nahatonga azy ireo hampiasa ny vola eto amin’ny firenena. Teo ihany koa ny fisokafana sy ny fananan’ny Filoha fanetren-tena lavitry ny herisetra. Izany rehetra izany, hoy izy, tsy azo kosehina na fafana ao anatin’ny tantara…
Ankoatra izay, notsindrian’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina fa taorian’ny fanapariahana ny foto-kevitry ny Fisandratana 2030, dia tsy nisy na dia herinandro iray aza tsy nisy asa na hoe tsy nisy asa vita. “Vita ny asa, notanterahina izay nambara, ary tsy vita intsony ny fitokanana izany satria be loatra. Miantso anareo aho, arovy ny zava-bita izay tokony hatevenina. Ny Filoham-pirenena dia mitarika ihany fa ianao no miara-manatanteraka izany miaraka aminy. Adidiko ny manoro ny lalan-kizorana ho amin’ny fampandrosoana amin’ny alalan’ny vina Fisandratana 2030. Fantatrareo ny zava-bitako, ny fahavononako hampandroso ity firenena ity. Isika rehetra miaraka no tena antoky ny fampandrosoana, ary izany indrindra no mahatonga ahy androany haneho aminareo ny fahavononako hijoro hatrany hanohy sy hiaro ny asa izay efa natomboka ka hanapahako hevitra amin’ny hirotsahako hofidiana Filoham-pirenena indray”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina teny am-pamaranana.
Ny fividianana ny Air Force One II (60 tapitrisa Dolara, na 900 miliara) tamin’ny alalan’ny volam-bahoaka, ary ny fanomezana ny velarantany midadasika ho an’i Daewoo, ireo no anisan’ny fitaovana goavana teo am-pelatanan’i Andry Rajoelina sy ...Tohiny